Freedom Mashava, Author at The Financial Gazette
TelOne partners Africa University
TELECOMMUNICATIONS service provider TelOne has entered into a partnership with Africa University to develop knowledge and skills among its executives. (more…)
Varun commissions US$60 million plant
VARUN Beverages Zimbabwe (Varun) is set to increase its foothold on the local market after commissioning a new US$60 million production plant yesterday, as it announced plans to go into other fast-moving consumer goods sectors such as juices and dairy. (more…)
Digital banking craze hits Zimbabwe
ZIMBABWE’S banking sector is set to witness fundamental changes in the near future following a surge in digital banking initiatives in various markets across the world. (more…)
IoDZ calls for directors’ accreditation
THE Institute of Directors Zimbabwe (IoDZ) says there is need for specific training and accreditation for board members to improve adherence to corporate governance and stem corruption. (more…)
Blessing Mudavanhu named IoDZ top chief executive in 2021
CBZ Holdings boss Blessing Mudavanhu has been named both the Institute of Directors Zimbabwe (IoDZ) 2021 director of the year and chief executive of the year. (more…)
West Property plans ‘huge’ mall
WEST Property Zimbabwe says it is planning to build a shopping mall in Harare, which will be the biggest in the country. (more…)
Electric vehicles policy on cards
ENERGY minister, Zhemu Soda, says the government is in the process of formulating an electric-vehicles (e-vehicle) policy as part of its efforts to achieve universal access to sustainable and modern energy in Zimbabwe by 2030. (more…)
Chemplex hunts for new CE
CHEMICALS and fertilisers maker, Chemplex Corporation (Chemplex) says it is hunting for a new chief executive to replace Tapuwa Mashingaidze, who died in January. (more…)
Emilia Chisango leaves Cassava Smartech
CASSAVA Smartech Zimbabwe (Cassava), finance director and executive board member, Emilia Chisango is leaving the fintech giant after a two-year tenure. (more…)